Dolry HIFI Stone dia mitondra AirPlay amin'ny mpandahateny 30-pin | Vaovao IPhone
Ny fiovana avy amin'ny mpampitohy dock 30-pin mankany amin'ny tselatra dia manana tombony amin'ny famelana ny famolavolana fitaovana manify kokoa, mamela toerana bebe kokoa ho an'ny singa hafa na ny mpampitohy vaovao dia azo ampifandraisina amin'ny toerana rehetra, saingy misy fahavoazana lehibe: Ireo mpandahateny docked 30-pin dia voaozona. Ilay Vato Dolry HIFI vaovao dia ny adaptatera voalohany mahatonga ny mpandahateny handao izany sazy fanamelohana izany ary lasa mpandahateny mifanentana amin'ny AirPlay vaovao.
Izy io dia manana maodely roa, amin'ny mainty sy fotsy, miaraka amina endrika kanto, miaraka amin'ny alohan'ilay manjelanjelatra ary ao aoriana ny matte. Misy ihany koa maodely roa samy hafa, ny Dolry HIFI Stone sy ny Stone S, miaraka amin'ny tsy fitovizany izay manana bokotra fikitika ity farany ary mifanaraka ihany koa amin'ireo fiasan'ny radio mivantana an'ny fampiharana izay ananan'i Dolry ho an'ity fitaovana ity. Ny maodely "tsy S" dia afaka milalao amin'ny alàlan'ny AirPlay ny atiny anananao amin'ny Mac anao na fitaovana iOS hafa mifanaraka amin'ity rafitra ity. Tsotra toy ny fanombohana playback sy fisafidianana ny fitaovana Dolry amin'ny safidin'ny fitaovanao. Inona koa, Rehefa mampiasa WiFi fa tsy Bluetooth, lehibe kokoa ny elanelam-potoana toy ny kalitaon'ny feo.
Fa araka ny efa nolazainay, Dolry koa manana fampiharana maimaimpoana ao amin'ny App Store hahafahanao mihaino ireo onjam-peo amin'ny alàlan'ny Internet, ary manana tombony ihany koa fa raha vao manomboka ny playback dia tsy ilaina intsony ny eo akaikin'ilay fitaovana dia handray mivantana ny angona avy amin'ny internet i Dolry.
Rehefa avy nanandrana fitaovana mitovy amin'izany fa mampiasa Bluetooth sy tsy mahomby, Dolry no fanantenako farany hahafahako manohy mampiasa ilay mpandahateny "taloha".. Efa anananao io avy amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny vidin'ny fandefasana 89 euro + 5 euro. Raha izany, raha manana fitaovana Android ianao, i Dolry dia manana fampiharana mitovy amin'ny Google Play ary mifanaraka amin'ny DLNA izy io.
Fampahalalana bebe kokoa - Ireo mpanamboatra fitaovana dia misafidy ny fifandraisana Bluetooth
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Dolry HIFI Stone dia mitondra AirPlay amin'ny mpandahateny 30-pin anao